2017 May 14 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
daawo:Qudbadii Ra`isul wasaare Kheyre Ka Jeediyya Shirka Doxa ,Maxuu Kaga Hadlay
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Doxa ee dalka Qadar kaga qeybgalaya shirka 2017 Doha Forum kaasi oo labo maalmood halkaasi ka socon doona , waxa uuna qudbad uu ka jeediyay halkaas kaga hadlay xaaladda dalka Somnaliya
WAR DEG DEG AH: M/weyne Gaas oo si faahfaahsan uga hadlay Kordhinta baarlamaanka & Fariin-na u diray Xildhibaanada Puntland
LONDON(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay PutlandTV ayaa la weydiiyey su’aal ku aadan kordhinta xubnaha golaha Wakiilada oo uu dhawaan codsaday. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu sidaas ugu dhiiraday in la helo cadaaladda iyo Sinaan dhameystiran, oo ay shacabku helaan matalaad toos ah. Rajadiisa ku aadan in la aqbalo talaabadan […]
UPDAT: Madaxweynaha Puntland oo si adag uga hadlay Dhismaha Garoonka Garoowe & Hakadka ku yimidba
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadda si toos ah Wareysi su’aalo looga weydiinayo PuntlandTv ayaa ka hadlay kaabayaasha dhaqaalaha ee dawladda Puntland Madaxweynaha oo la weydiiyey dhismaha madaarada Garoowe, Gaalkacyo & Boosaaso ayuu sheegay in ay xooga saarayaan sidii garoomadan ay si deg deg ah u dhameystiri doonaan. Madaxweynaha oo […]
DEG DEG+FADEEXAD: RW Kheyre oo 3 qof oo kamid ah Beeshiisa si gaar ah ugu magacaabay Ilaha dhaqaalaha ee Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES)- Labo maalin ka hor intii uusan dalka ka dhoofin Raysalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayuu u gudbiyey Wasaaradda Maaliyadda magacyada 12 qof oo noqonaya Agaasimayaasha Waaxyaha dhaqaalaha ee Wasaaradda Maaliyadda. Horrey Garyaqaanka guud arrintan ayuu ugu eedeyey Raysalwasare Xasa Cali Kheyre, waxaana hadda muuqanaysa in uu faragalin hoose oo adag ku hayo shaqada Wasaaradda. […]
XOG XASAASI AH+AKHRISO: Maxaad ka og tahay Abaabul Siyaasadeed oo ka socda Nairobi, kuna wajahan Xaafiisyada Farmaajo & Kheyre?
NAIROBI/MOGADISHU(P-TIMES)- Xildhibaano gaaraya 100 xildhbaan oo kamid ah baarlamaanka Faderaalka ayaa iskugu tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo ay ka bilaabeen abaabulo ka dhan ah Xukuumada Soomaaliya, oo ay doonayaa in ramadaanka ka dib ay mucaaradid xoogan ku furaan. Xubnahan waxaa ku jira kuwa si adag uga soo horjeeda siyaasadad hogaamineed ee Madaxweynaha & […]
Dawladda Puntland & Bangiga Aduunka ayaa markii ugu horeysay tababar u furay qaar kamid ah Madax qeybeedyo dhawaan loo qaatay Wasaaraddaha dawladda Punland, kuwaas oo qeyb ka ah iskaashiga dhexmaraya dawladda & Bangiga Aduunka. Shaqaalahan ayaa qeyb ka ah tababaro la siinayo Shaqalaaha dawladda iskugu jira 180 shaqaale oo dhawaan ku guuleystay Imtixaanka loo galayo […]
AKHRISO: Xogaha Shirka LONDON ee aan Saxaafadda loo sheegin?
LONDON(P-TIMES)- Soomaaliya shir looga hadlay ayaa dhawaan lagu soo gaba-gabeeyey magaalada London ee dalka UK, waxaana ka soo baxay qorshayaal badan oo aan cidna lala wadaagin. Warbaahinta caalamiga ah ayaa dabagal ku sameysay sidda looga jawaabay dalabyo ay soo gudbisay dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana dhinacyada Dhaqaalaha & Amniga. Dawladdaha ugu waa weyn dhanka Dhaqaalaha […]
XOG MUHIIM AH: Guddoonka baarlamaanka PL oo Guddiga Joogtada ah la kulmi doona, Maxaase ay kala hadlayaan?
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ayaa sheegaya in Guddoonka baarlamaanka Puntland ay la kulmi doonaan guddiga joogtada ah oo ay ka wada hadli doonaan diyaarinta Ajendayaasha looga hadli doono kalfadhiga golaha Wakiilada oo la filayo in uu furmo bisha nagu soo aadan sidda sharciga ah. Warar hoose ayaa sheegaya in Ajendayaasha lagu dari doono […]
XOG MUHIIM AH: Mucaaradka Xukuumada M/weyne Gaas oo bilaabay arrimo xasaasi ah & Dawladda oo aan ka hadlin.
BOOSAASO(P-TIMES) ­– Saacadihii ugu dambeeyey si weyn ayaa loo hadal hayaa qaraarkii Madaxweynaha dawladda untland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaga codsaday guddoonka baarlamaanka Puntland in ay kusoo daraan Ajendaha kalfadhiga baarlamaanka ee bisha June dib u eegista qodobo kamid ah Dastuurka Puntland. Madaxweyne Gaas ayaa si aan leex-leexd laheyn ugu dhawaaqay in la gaaray […]
DEG DEG+XOG MUHIIM AH: M/weynaha Somalia oo casumaad xasaasi ah ka helay Dalka Masar & Xiisad ka dhalan karta
Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo casumaad rasmi ah ka helay Madaxweynaha dalka Masar Jen, Cabdifitaax Si-Si, taas oo timid saacado uun markii uu ka soo laabtay magaalada London. Madaxxweynaha Soomaaliya ayaa aadaya Masar todobaadkan gudihiisa ama dhamaadkiisa, sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya Aqalka Madaxtooyada Soomaaliya. Soomaaliya waxay […]